Wadada Yenikent Yazidere waxay noqotey Wadada la taaban karo | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirWadada 'Yenikent Yazidere' waxay noqotaa Wadada la taaban karo
Wadada 'Yenikent Yazidere' waxay noqotaa Wadada la taaban karo
15 / 10 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, Asphalt News, GUUD, WADADA, TURKEY
wadada yenikent yazidere waxay noqoneysaa wado la taaban karo
Eskişehir degmada Metropolitan, Turkey ayaa tijaabiyay in magaalooyin kala duwan oo ku sii socda waddada, waxna lagama guul qaatay shaqada la taaban karo. Dhawaan ayaa la soo gabagabeeyey Cevizli-Bardakçı-Hankaraağaç-Gökçekuyu xaafadaha daboola wadada laamiga ah ee 30 kilomitir, iyo hada inta udhaxeysa degmada Seyitgazi iyo Ankara Highway Yenikent-Yazidere wadooyinka howlaha udhaxeeya wadooyinka la taaban karo ayaa biloowday.
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso waddo la taaban karo oo labadaba mid dhaqaale iyo mid dheerba ka dheer tan laamiga ah. Degmooyinka Inönü, Seyitgazi iyo Tepebaşı kadib shaqadii ayaa la dhameystiray Wadada Ankara ee isku xirta Kalkanlı-Aksaklı-Yenikent-Büyükdere-Yazidere iyo xarunta degmada Seyitgazi ee udhaxeysa wadada weyn ee halbowlaha ah, shaqo balaarin waddo la taaban karo ayaa la bilaabay. Bilaabidda kor u qaadista heerarka kooxaha wadada, baaxadda wadada laga bilaabo mitirrada 6 illaa mitirrada 8 ka dib shaqooyinka la taaban karo ayaa bilaabmi doona.
Duqa magaalada Seyitgazi Uğur Tepe, oo warbixin ka siiyay daraasadaha ayaa yidhi: Kiiloomitir 30 Cevizli-Bardakçı-Han wadada kadib wadada la taaban karo ee hada udhaxeysa Yazdere-Yenikent-Aksakli-Buyukdere Dowlada Hoose ee Magaaladu waxay bilaabatay iney shaqeyso. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo kooxdeena oo dhan anaga oo ah Duqa Magaalada Yılmaz Büyükerşen iyo Xoghaynta Guud Ayşe Ünlüce kuwaas oo ahmiyad weyn siiya daraasadaha mawduucan ”.
Wadada 5 ayaa isku xirta xaafada weyn iyo wadada weyn ee tagta xarunta degmada ee Ankara sababta oo ah culeyska taraafikada waa mid culus sababta oo ah mas'uuliyiinta Dowlada Hoose ayaa sheegay in aagga daraasadda lasiiyay adeeg gaadiid, darawalada ayaa looga digay inay u hogaansamaan calaamadaha taraafikada iyo tilmaamayaasha.
Yenikent - Hantida dhismaha wadada Temelli waa la joojiyay
Yenikent - Dhismaha wadooyinka aasaasiga ah, dhismayaasha farshaxanka, buundada, subbase-ka,
Wadada xeebta ee Mediterranean ayaa waddada kala qaybsan
Waddada Jidka Aasaasiga ah halkii loo marin lahaa jidka Asphalt ee Manisa
Wadooyinka Altinordu waxay noqdaan kuwo la taaban karo
Wadada Yenikent Yazidere